मानक Headsets- "gags" एक विशाल दायरामा बजार मा उपलब्ध छन्। विविधता वैश्विक ब्रान्डहरु, र साना-ज्ञात चिनियाँ ब्रान्डहरु, तर पनि आधारभूत विशेषताहरु तिनीहरूलाई बीच, निर्माता को एक विस्तृत दायरा मात्र कारण छ। उत्तरार्द्ध पक्ष मा, र विशेष ध्यान मोडेल को यो वर्ग छैन किनभने अक्सर धनी भित्री सामग्री भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो विशेष प्रवेश-स्तर मूल्य लागू हुन्छ। यो जापानी निर्माता को उत्पादनहरु मर्यादा ब्रांडेड अवशोषित जो Sony MDR EX15LP, एक परिमार्जन छ, तर हेडफोन बजेट खण्ड को साधारण कमीकमजोरी हटाउन छैन।
यसलाई तुरुन्तै विकास लाइन निर्माता मा कान्छो छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। जबकि लायक 500 rubles मोडेल छन् रूसी बजार मा यसको मूल्य ट्याग 600-700 दल्नु छ।। उपकरण MDR EX15LP SONY को जोर एक माध्यमिक गुणस्तर गर्न therein राखिएको थियो उल्लेखनीय। अडियो क्षमताहरु सन्दर्भमा, यो मोडेल साना संस्करण naushnikov- "gags" अनुरूप छ, तर stylistic र संरचनात्मक सुविधाहरू कम लागत समकक्षों को पृष्ठभूमिमा देखि यो भेद।
हामी मोडेल गुणवत्ता संगीत प्लेब्याक लागि सडक खण्डको छेउमा धेरै छ भनेर भन्न सक्दैन, तर यो उनको बलियो पक्ष छैन। कम से कम तपाईं नै पैसा को लागि एक सभ्य प्ले प्रदान गर्नेछ भन्ने धेरै विकल्पहरू पाउन सक्नुहुन्छ। लाभ MDR EX15LP सोनी, बरु, यसको बाह्य मापदण्डहरु मा झूठ - रोचक संरचनात्मक समाधान गर्न डिजाइन देखि।
मा-कान हेडफोन, पनि प्रयोगकर्ता बीच शायद इलेक्ट्रनिक्स संग, सिद्धान्त मा, उच्च गुणस्तरीय ध्वनि प्रदान गर्न डिजाइन सम्बन्धित। सबै को पहिलो, तिनीहरूले प्रयोग र सान्त्वना सजिलो केन्द्रित छ। यो निर्देशन, र हेडफोन निर्माताहरू MDR EX15LP सोनी, जो को निम्नानुसार प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ विशेषताहरु काम:
न्यूनतम आवृत्ति सूचकांक - 8 हर्ट्ज।
अधिकतम आवृत्ति स्तर - 22.000 हर्ट्ज।
यो संवेदनशीलता सूचकांक मोडेल - 100 Db।
प्रतिरोध - 16 ohms।
शिखर पावर उपकरण - 100 मेगावाट।
Shoring-अप - प्रदान गरिएको छैन।
आकार झिल्ली हेडफोन - व्यास9मिमी।
कनेक्टर - एक मानक 3.5 मिमि प्लग लागि।
कनेक्टर प्रकार - प्रत्यक्ष फारम।
वजन -3जी
"सोनी" कम्पनी आफ्नो उत्पादन को डिजाइन गर्न होसियार दृष्टिकोण लागि ज्ञात छ। यस मामला मा, यो Ergonomic आवश्यकताहरु संग संरचनात्मक सुविधाहरू संयोजन गर्न खोजे। मुख्य विशेषताहरु को एक कि बनाउन सिलिकन आवेषण को परिचय थियो हेडफोन को MDR र SONY राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन प्रदान गर्दा, कान मा EX15LP सहज पकड। पनि लायक टिप्पण Neodymium चुम्बक को प्रयोग हो। यो कम मूल्य मा-कान हेडफोन को खण्ड मा एक क्रांतिकारी चरण छैन, तर तिनीहरूले शायद कि बजार को प्रारम्भिक स्तर मा ध्यान कम्पनीहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
ध्वनि गुणवत्ता MDR EX15LP SONY
हामी महत निर्माता देखि एक उत्पादन रूपमा मोडेल मूल्याङ्कन भने, पाठ्यक्रम, यो संगीत प्रेमी लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। तर, बजेट स्तर श्रेणी स्वामित्वको धेरै उपकरणहरू आवश्यकताहरु मा छूट बनाउन बनाउँछ। धेरै परिस्थितिहरू, उद्धार र मध्यम स्पिकरहरू, जो को खर्च सन्तुलित प्रजनन द्वारा प्रदान गरिएको छ। धेरै पनि एक शक्तिशाली हेडफोन व्यापक आवृत्ति सीमा संग निर्धक्क काम गर्न सक्षम, रूपमा चिनारी Sony MDR EX15LP। द्वारा र ठूलो यो निश्चित आरक्षण मात्र विषय हो, तर। पहिले, पाप को औसत दायरा कमजोर र muffled पनि प्ले। दोश्रो, बास उदास समतल र monotonous ध्वनि प्रजनन तल्लो स्तर मा व्यक्त राहत बिना।
हेडफोन मा सकारात्मक प्रतिक्रिया
मोडेल को अडियो सुविधाहरू मूल्य ट्याग मेल यदि छैन, र यो डिजाइन को मामला मा, कम-ज्ञात उत्पादकहरु तिनीहरूलाई प्रतिद्वन्द्वी उपकरणहरू संग छ, र डिजाइन समाधान को पूर्ण सेट अवस्था फरक छ। सदस्य तीन परस्पर कान पैड, वक्ता र डिजाइन समाधान Sony MDR EX15LP संग सहज डिजाइन बाडे को उपस्थिति को लागि मोडेल प्रशंसा गरे। समीक्षा पनि उपकरणको compactness र साना वजन याद गर्नुहोस्। सकारात्मक राय को संयोजन देखि यो विकल्प Ergonomic इलेक्ट्रनिक्स गुणस्तर मोल गर्ने व्यावहारिक मान्छे को लागि उपयुक्त छ कि अन्तमा गर्न सकिन्छ। मोडेल को मूल शैली प्रेमीहरूलाई पनि विजेता खरिद हुनेछ लागि - निर्माता धेरै रंग छनौट मा हेडफोन उत्पादन गर्छ।
धेरै मालिक छोटो आयु छ यन्त्र सञ्चालन अनुभव संरचनात्मक भागहरु र तार छ। आवास टूटना प्राय हुन्छ रूपमा सम्भवत निर्माताहरू सबै भन्दा राम्रो प्लास्टिक प्रयोग गर्नुभएन। बारी मा, पातलो तार भारी ब्रेक लगान अन्तर्गत मात्र विश्रामहरू छ, तर पनि चाँडै बाहिर लगाउने। वास्तवमा, धेरै उत्पादन चाँडै खराब छ किनकी, मोडेल को सफेद संस्करण खरीद विरुद्ध चेतावनी। यो जहाँ तपाईं हेडफोन Sony MDR EX15LP प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो ठाँउ हो - नकारात्मक राय आधारित, यो वातावरण कि अन्तमा गर्न सकिन्छ। समीक्षा पनि मोडेल कम तापमान संवेदनशील र केबल दु छ कि दर्शाउन। तथापि, सडक प्रयोग रक्षा मा उपकरण धेरै राम्रो इन्सुलेशन भन्छन्।
बजेट खण्ड देखि मा-कान हेडफोन प्रत्येक संस्करण धेरै गम्भीर बेफाइदा छ। केही मोडेल अरूलाई बिल्कुल छैन उपस्थिति मा आकर्षक हुँदा, अरूलाई Ergonomics मामलामा समस्या धेरै छुटकारा गर्दा, सम्पूर्ण आवृत्ति सीमा लागि संगीत प्ले सामना छैन। यो पृष्ठभूमिमा विरुद्ध, हेडफोन Sony MDR EX15LP एक विजेता भन्दा बढी हेर्न, तर एक संदिग्ध मार्जिन भताभुंग पार्छ सकारात्मक पक्ष। मात्र होसियार र सही उपचार को अवस्था मा यो संशोधन को खरीद ध्यान गर्नुपर्छ। यो earphones यात्रा प्रयोगको लागि उपयुक्त छैन, तर कुनै पनि अवस्थामा तार तापमान र प्लास्टिक को fragility गर्न विशेष capricious विचार गर्नुपर्छ कि होइन। धेरै प्ले गुणस्तर बारे, छैन सबै सिद्ध छ, तर मध्यम वक्ता उपस्थिति अलिकति संगीत को प्रभाव smooths। साथै, यो एक एकदम व्यापक emphasizing लायक छ आवृत्ति दायरा, यसको वर्ग मा सस्ती हेडफोन लागि rarity छ।
जेरक्स Phaser 6000 मुद्रक सानो workgroups लागि आदर्श छ
हेडफोन Marley कसरी चयन गर्ने? Marley मुस्कान JAMAICA Rasta को हेडफोन हाउस: विवरण
MFP Kyocera Taskalfa 181: मूल्य र गुणस्तर को सिद्ध संयोजन
कसरी वायरलेस माउस जडान गर्न?
कसरी छिटो र सजिलै कम्प्युटर स्क्रिन अन गर्न?
फेसनदार "ह्वेल" - Rastamanskaya टोपी। हामी आफ्नो हात स्टाइलिश headdress संगत
चीन - गाढा महारानी Mortal Kombat एक्स मा
एक सम्बन्धमा के मानिस वृष
फिफा विश्व कप 1990. विश्व कप 1990 को इतिहास
खाना उद्योग को लागि एक व्यापार योजना कसरी सुरु गर्न
पत्थर को जापानी बगैचा: को परिदृश्य को एक योग्य सजावट